Waxaan ka qeyb gali doonnaa Bandhigga Chinaplas 2021 ee Shenzhen laga bilaabo 13 -ka Abriil illaa 16 -ka Abriil.
Waxaan ka soo qeyb geli doonnaa bandhigga CHINAPLAS 2021 ee Shenzhen laga bilaabo 13 -ka Abriil illaa 16 -ka Abriil. Kuwa soo socda ayaa ah macluumaadka faahfaahsan ee bandhigga: Booth Our .: 16W75 Taariikhda Bandhigga: 13 -ka, Abriil. ilaa 16 -ka, Abriil. Alaabtayada: xaashiyaha PVC, xaashiyaha PP, xaashiyaha HDPE, usha PVC, tuubooyinka UPVC iyo ...
Warshadaha tobanka shirkadood ee warshadaha iftiinka ugu sarreeya ee Shiinaha, Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. ayaa ku guuleysatay magaca sharafta ee “Tobanka ugu sarreeya warshadaha caagga warshadaha iftiinka ee Shiinaha (xaashi caag ah). Tan iyo markii la aasaasay 1997, Lida Plastic waxay had iyo jeer raacdaa ...
Tayada Badeecada Caaga adag ee Lida si ay u gaarto Heerka Sare ee Caalamiga ah ama Dibadda
Lida Plastic Rigid PVC sheet sheet ayaa la baaray oo ay xaqiijiyeen waaxyo khuseeya, ilaa qodobbada Gobolka Hebei si ay u qaataan tallaabooyinka hirgelinta maareynta heerka caalamiga ah, waxay ku guuleysteen kormeerka suuqa Gobolka Hebei iyo maamulka ay soo saartay “korsashada ...